Ogaden News Agency (ONA) – Halganka Shacabka Ogaadeeniya Wuu Guulaystay By Aamiin Maxamed.
Halganka Shacabka Ogaadeeniya Wuu Guulaystay By Aamiin Maxamed.
Posted by Dulmane	/ August 27, 2018
Tan iyo markii laqabsaday dadka iyo Dalka Ogadenia gumaysigii cadaanka ahaa iyo Kan madawga ihina ukala dambeeyeen dhulka Soomaalida Ogadenia waxaa socday halgan uu shacabiga Ogadenia ku baadi goobayo xoriyad iyo madaxbanaani uu kaqaato isticmaarka kuhabsaday mudada boqolaalka sano ah
Wuxuuna si uu ugaadho himilada xoriyadeed uhuray naf maal muruq iyo maskax.
Waxaa naftooda uhibeeyay xoraynta dhulka soomaaliyeed ee Itoobiya gumaysto Wiilal iyo Gabdho
Waxaa dagalada iyo hardanka iska hor imaadka gulufyada hubaysan ku shihiiday geesiyaal aan la ilaawi doonan oo isagu jira rag iyo dumar.
Waxaa dalkooda kabara kacay hooyoyin caruur iyo abayaal da ah oo socod kugalay wadanada bariga Africa ilaa uu habqanku gaadhay guud ahaan Dacalada dunida.
Waxaa la laayay shacab masaakiin ah xoolo dhaqato ah Kuwa guryahooda iska jooga oo uu gumaysigu xaaqay have ugu daraato 10kii sano ee lasoo dhaafay e.
Inkasta oon lasoo koobi karin xaalada murugada leh ee ilaa hada gumaysigu kawada wadanka Ogadenia hadana waxaa muuqata in shacbiga Ogadenia uu yahay mid Mintid ah oo markasta kudhagan hadafka jiridaha adag ee Helitaanka xoriyad taama iyo in gumaysiga Layska dulqaado.
Aan kusoo dhawaado dulucda faalada e shacabka Ogadenia oo ah shacab gumaysigu bahdilay cabudhiyay ayaa hadana quluubtiisa waxaa Mar kasta kudhex nool hadafka gobanimo doon iyo inuu xaqiisa helo waxaana makhraati inoo ah dareenka uu maanta muujiyay shacabka gudaha oo dhamaan qaatay calanka jabhada Wadaniga xoraynta ogadenenia ONLF oo iyadu 34 sano udagalamaysa sidii xoriyad iyo aaya katashi loo gaadh siin lahaa shacabka Soomaaliyeed ee Itoobiya gumaysto.
Aan dul istaagnee Bal fiiri Sawirka wiilka yar ee calanka kor uhaya iyo Duqayda waawayn ee iyana calanka kor uhaya waxay ina tusaysaa in siqiir iyo kibiir aan nahay dad gobanimo doon ah.
waxaan ilahay uga baryayaa shacabka Soomaalida Ogadenia inuu uhir galiyo himiladooda xornimo doon.
Waa Walaalkiin Amiin mahamed Ahmed xaqdoon oo idinle Hala halgamo.